दक्षिण कोरियाली पानीजहाज निर्माता कम्पनीमा कामदार अभाव,अर्डर भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी ! – Kantipur Press
दक्षिण कोरियाली पानीजहाज निर्माता कम्पनीमा कामदार अभाव,अर्डर भने अहिले सम्मकै सबैभन्दा बढी !
दक्षिण कोरियाली पानीजहाज निर्माण कम्पनीहरुमा अहिले दक्ष कामदारहरुको अभाव हुन थालेको छ। विगतका बर्षहरुमा भन्दा यस बर्ष यहाँका पानीजहाज निर्माण कम्पनीहरुले जहाज निर्माणको अर्डर अत्याधिक पाइरहेका छन तर त्यसको अनुपातमा कामदारहरु उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या देखिन थालेको छ।
आउँदा महिनाहरुमा अझ धेरै कामको अर्डर पाउने सम्भावना रहेको हुँदा कम्पनीहरुले दक्ष कामदारको परिपूर्ति छिटो भन्दा छिटो गर्नुपर्ने जानकारहरुले बताइरहेका छन। तर दक्ष कामदार तत्कालै उपलब्ध हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको हुँदा कोरियाका पानी जहाज कम्पनीहरुले आउँदा दिनहरुमा अझ ठूलो कामदार अभावको समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ।
विगतमा पानी जहाज उध्योगले करिब एक दशक लामो मन्दी भोग्नुपरेपछि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका ठूलो संख्यामा दक्ष कामदारले काम छाडेका थिए। अहिले कोरियाका केन्द्रिय सरकार तथा स्थानिय सरकारहरुले पानी जहाज क्षेत्रमा कामदारहरुलाई आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न किसिमका सहयोगका प्याकेजहरु घोषणा गरिरहेका छन। तर जानकारहरुका अनुसार त्यतिले मात्रै विगतमा यो क्षेत्रबाट पलायन भएका दक्ष कामदार काममा फर्किने सम्भावना कम रहेको छ।
दक्षिण कोरियामा विश्वकै ठूला तिन पानी जहाज निर्माण कम्पनीहरु कोरिया सिपबिल्डिङ एण्ड अफसोर इन्जिनियरिङ (केएसओइ), सामसङ हेभि इण्डष्ट्रिज तथा देओ सिपविल्डिङ एण्ड मारिन इन्जिनियरिङ (डिएसएमइ) रहेका छन। यि तिनै कम्पनीले गत बर्ष आफूले राखेको लक्षभन्दा बढि मात्रामा कामको अर्डर पाएका थिए। यि कम्पनीहरुले विश्वका प्रख्यात र ठूलो पानीजहाज निर्माणको अर्डर पाउन सफल भएका थिए।
कोरिया सिपबिल्डिङ एण्ड अफसोर इन्जिनियरिङ (केएसओइ) एक्लैले गत बर्ष २५.१ बिलियन डलर बराबरको काम पाएको थियो। यो अर्डर उसले राखेको लक्षभन्दा ५० प्रतिशतले धेरै हो। त्यसैगरी सामसङ हेभि इण्डष्ट्रिजले १२.२ बिलियन डलर बराबरको कामको अर्डर पाउन सफल भएको थियो। यो अर्डर अघिल्लो बर्षको कम्पनीको अर्डरभन्दा ३४ प्रतिशत बढि हो। यस्तै देओ सिपविल्डिङ एण्ड मारिन इन्जिनियरिङ (डिएसएमइ) ले १०.९ बिलियन डलर बराबरको अर्डर पाएको थियो। यो अर्डर कम्पनीले राखेको लक्ष भन्दा करिब ४० प्रतिशतले धेरै हो।ईपिएस साथीबाट